तराईका भूमिपुत्रको भाग खोस्ने सात बुँदे चाहिँदैनः शान्ता चौधरी - Nepal News - Latest News from Nepal
सात बूँदे सुझावका नाममा भारतले दबाब दिएको थाहा पाउँदा छक्क परेकी छु
काठमाडौँः केही वर्ष अघि थारु कल्याणकारिणी सभाले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर तराईमा भारतीयहरुलाई नागरिकता सजिलैसँग वितरण गरेर थारु समुदायलाई अल्पमतमा पार्ने प्रयाश गरिएको भन्दै विरोध गरेको थियो ।
त्यसबेला यो विषयलाई गम्भीरता साथ लिइएन । नागरिकता वितरणलाई खुकुलो बनाउँदा थारु समुदायले मात्र नभएर देशका सबै समुदायले भविष्यमा समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने सोचिएन ।
खुकुलो नागरिकता वितरणको व्यवस्थाले गर्दा युगौंदेखि तराईका भूमिपुत्र मधेसी समुदायको पनि भाग खोसिने अवस्था आएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार गम्भीर रुपमा दोषी रहेको छ ।
नागरिकताको गम्भीर सबाललाई पनि असर पर्ने गरी मित्रराष्ट्र भारतले नेपाललाई सात बूँदे सुझावका नाममा दबाब दिएको थाहा पाउँदा म छक्क परेकी छु । नेपालको आन्तरिक मामिलामा मित्रराष्ट« भारतले यसरी दबाब दिने काम किन गरिरहेको छ भन्ने चिन्ता लागेको छ । यसले दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई फाइदा गर्दैन ।
मिडियामा आएको सात बुँदे सुझावमा उठाइएका कुराहरु अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको छ । अङगीकृत नागरिकलाई राज्यको कार्यकारी पद दिनुपर्ने दबाब भारतले किन दियो ? हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विशेष गरी थारु समुदायले झनै सोच्नुपर्ने भएको छ ।
हजारौ वर्षदेखि नेपालका वासिन्दा थारु समुदायले कतिपय अधिकारहरु नपुगेको भन्दै आवाज उठाइरहेको छ ।
राज्यका कार्यकारी पदहरुमा थारु पनि पुग्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बेला अब हामीले अंगीकृत नागरिकहरुसँग अवसरहरुको भागवण्डा गर्नुपर्ने ? थारु तथा अन्य समुदायहरुले यो सहन सक्ने कुरा होइन । हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ ।
हजारौ वर्षदेखि नेपालका वासिन्दा थारु समुदायले कतिपय अधिकारहरु नपुगेको भन्दै आवाज उठाइरहेको छ । राज्यका कार्यकारी पदहरुमा थारु पनि पुग्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बेला अब हामीले अंगीकृत नागरिकहरुसँग अवसरहरुको भागवण्डा गर्नुपर्ने ?
थारु तथा अन्य समुदायहरुले यो सहन सक्ने कुरा होइन । हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ । भन्न पनि सक्दैन । जनताकै सुझाव पर्याप्त रुपमा समेटन नसकिएको संविधानमा भारतको सुझाव कसरी समेट्न सकिन्छ ? मित्र राष्ट भारतले दिएको सुझाव स्वयं भारतको संविधानमा समेत उल्लेख भएको देखिँदैन ।
अब सरकारले मित्र राष्ट भारतलाई सुझावका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ, त्यो भन्दा बढि केही गर्न सकिने अवस्था छैन भनेर कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । (यी पूर्व सभासद् शान्ता चौधरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका विचार हुन)